Relationshipသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှပျော်ရွှင်ရတဲ့အတွဲတိုင်းလိုလိုဖြစ်တတ်ကြတဲ့သဘာဝလေးတွေက | Buzzy
Relationship သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ အတွဲတော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတဲ့ သဘာဝလေးတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ..သင်တို့အတွဲရောဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေကြပြီလားဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်...
1. သ၀န်တိုခြင်းတွေဟာ သင်တို့အတွက်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါ
သ၀န်တိုတယ်ဆိုတာသင်တို့အတွက်ရင်ခုန်စရာကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြည့်ဝယုံကြည်လုနီးပါးဖြစ်နေတာကြောင့်သ၀န်တိုတာတွေ ဘာတွေကိုရင်ခုန်မနေတော့ပဲံ လိုရင်းတှိုရှင်းနဲ့ကိုယ်သိချင်တာကိုပေါ်တင်မေးတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရှက်နေစရာ ရှိန်နေစရာ ရယ်မရှိတတ်ကြတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုလွတ်လပ်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားတတ်ကြပြီး အချိန်တိုင်းကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းသွားတတ်ကြပါတယ်။
တကယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ အတွဲတွေ အဆင်ပြေနေကြတဲ့ အတွဲတွေ မတရားချစ်ကြတဲ့ အတွဲတွေဟာအချိန်ကြာလာလေ ၀လာတတ်ကြလေပါပဲ။ စားကောင်းသောက်ကောင်းအိပ်ကောင်းပြီး ရည်းစားပူမိရတာမျိုး စနှိုက်ကြော်တွေရန်ကို ကြောက်ရတာမျိုးမရှိတာတွေကြောင့် နှစ်ယောက်ပေါင်းပျော်ရွှင်စွာစားသောက်နေထိုင်ရင်းပိုဝလာတတ်ကြပါတယ်။
4. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရီတွေကူးစက်လာပြီး ဘာကြောင့်ရီတာလို့ပြောစရာမလိုပဲ နားလည်နိုင်ကြတယ်
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ယောက်စိတ်ကိုတစ်ယောက်ပြောနေစရာမလိုပဲသိနေကြပါပြီ။ တစ်ယောက်က တစ်ခုခုကိုတွေ့လို့ရယ်လိုက်မိရင်တောင်နောက်တစ်ယောက်ကရှင်းပြနေစရာမလိုပဲ အော်တိုလိုက်ရယ်မိတာမျိုးပါ။ ဒီလိုFeeling မျိုးက တစ်ယောက်စိတ်တစ်ယောက်အပြည့်အ၀သိတဲ့အတွဲမျိုးမှာသာရှိနိုင်တာမျိုးပါ။
ယောင်္ကျားလေးအလုပ်မိန်းကလေးအလုပ်ဆိုပြီးတာဝန်ခွဲဝေနေခြင်းမရှိပဲ တစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ တာဝန်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရန်ဖြစ်ရင်းပြန်ချစ်ရင်းကနေပဲ ကူညီပေးတတ်ကြပါတယ်။